Utu Pi OS Mee Nwelite rutere nkwado nnwale maka RPI 4 8GB na ndị ọzọ | Site na Linux
Utu Pi OS Mee 2020 Mmelite biara na nkwado nnwale maka RPI 4 8GB na ndị ọzọ
The Raspberry Foundation ysmụaka wepụtara ụbọchị ole na ole gara aga, ntọhapụ nke mmelite ohuru nke sistemụ arụmọrụ gị maka utu "Utu Pi OS" nke amaraburu na aha Raspbian nakwa na apụtara nhapụ ha site na ụbọchị e wepụtara ha "yyyy / mm / dd". Ma ugbu a, nke gbanwere na aha ya kesara aha ya na mbipụta ya ga-amata naanị n'ọnwa nke afọ ha wepụtara.
Banyere ụdị ọhụrụ nke sistemụ ahụ, Nke a na-aga n'ihu na ngwungwu Debian 10 "Buster" ma webata ụfọdụ mgbanwe, nke nkwado maka ụdị 8 GB nke Raspberry pi 4 pụtara, yana mgbakwunye nke ngwa ọhụrụ akpọrọ "Bookshelf", tinyere ihe ndị ọzọ.
1 Gini bu ihe ohuru na osiso osiso nke onwa Mee 2020?
2 Budata osote osusu Mee ka mmelite 2020
Gini bu ihe ohuru na osiso osiso nke onwa Mee 2020?
Otu n'ime ndị isi mgbanwe nke ọhụrụ a version na anyị niile na-achọpụta, bụ el gbanwee aha nkesa (dika edere ya na mbido), yana 64-bit nkwado nkwado maka ụdị ọhụrụ nke Raspberry Pi 4 nke na-abịa na 8GB nke RAM.
Ọzọ mgbanwe na-adade ke ọhụrụ version bụ na-agbakwunye "Bookshelf" ngwa Ọ na-enye ohere ịnweta akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ ndị Raspberry Pi Press bipụtara na n'ime ya ị nwere ike ịzụta ụdị akwụkwọ si na ngwa ahụ ma ọ bụ budata PDF n'efu.
Dị ka ọtụtụ n'ime unu maara, anyị nwere ndị nkwusa nke anyị, Raspberry Pi Press, nke na-ebipụta akwụkwọ akụkọ dị iche iche kwa ọnwa, gụnyere MagPi, Magazin HackSpace, na Wireframe. Ha na-ebipụta a dịgasị iche iche nke ndị ọzọ akwụkwọ na magazin, nke a tọhapụrụ maka zụọ dị ka a anụ ahụ ngwaahịa (si weebụsaịtị gị ) ma ọ bụ dị ka free PDF nbudata.
Iji mee ka ọdịnaya niile a pụta ìhè ma dịrị mfe ịnweta, anyị agbakwunyela ngwa ngwa ọhụụ ọhụrụ - ị ga-ahụ ya na ngalaba Enyemaka nke menu ndị isi.
Ọzọkwa, iji mee ka ọrụ nke ndị anya na-adị mfe, a gụnyere ngwa na nhazi ahụ iji buo mpaghara ọ bụla buru ibu na ihuenyo ahụ.
E wuru ngwa ahụ site na ncha, ebe ndị mmepe enweghị afọ ojuju na mmejuputa ndị dị ugbu a. Enwere ike itinye mmemme ahụ site na ịhọrọ Ebube na Universal Access ngalaba nke Ngwa ngwa akwadoro. Callkpọ oku, ịnwere ike iji njikọta Ctrl-Alt-M ma ọ bụ akara ngosi dị n'akụkụ aka nri nke ogwe ọrụ ahụ.
Na Njirimara ị nwere ike ịhọrọ ọdịdị na nha nke iko na-eto eto, yana ọkwa mbugharị.
Iji wụnye ya, bido Ngwa ndị akwadoro na onyonyo ọhụụ ma họrọ magnific n'okpuru Universal Access. Ozugbo arụnyere ya, regharịa.
Ga-ahụ akara ngosi iko na aka nri nke aka ọrụ ahụ: iji mee ka enyo enyo, pịa akara ngosi a ma ọ bụ jiri ụzọ mkpirisi keyboard Ctrl-Alt-M. (Iji gbanyụọ ịdị ebube, pịa akara ngosi ọzọ ma ọ bụ jiri otu ụzọ ahụ ụzọ mkpirisi ụzọ.)
Mgbanwe ọzọ anyị nwere ike ịchọta na ụdị ọhụụ a bụ ngosi nke ngwaọrụ mmepụta ụda na subsystem ALSA.
Kama ngwaọrụ nkịtị maka HDMI na isi okwu isi, ugbu a, a na-enye ngwaọrụ abụọ dị iche iche.
Ndabara mmepụta bụ HDMI. Iji gbanwee ngwa ọrụ ọdịyo na-arụ ọrụ, ịnwere ike iji apụl na-achịkwa olu ma ọ bụ kọwaa nke ọma ngwaọrụ ahụ na faịlụ .asoundrc (maka ụda isi okwu, "defaults.pcm.card 1" na "defaults.ctl.card 1").
Finalmente ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike ịlele ntọhapụ ndetu nke a ọhụrụ version nke usoro na ukara website nke utu pi ma ọ bụ site na njikọ dị n'okpuru.
N'otu ụzọ ahụ, ndị mmepe kesara vidiyo ebe egosiri mgbanwe ndị kachasị mkpa:
Budata osote osusu Mee ka mmelite 2020
Maka ndị nwere mmasị ibudata ụdị ọhụụ nke sistemụ a, ị nwere ike nweta ọ bụla oge nke atọ na nsụgharị iji kwadebe: Lite (432 MB) maka sistemụ nkesa, Obere Desktọpụ (1.1 GB) na desktọọpụ na nke zuru oke "PIXEL" na ụdị nke ọzọ bụ nke zuru ezu na mgbakwunye nke ngwa (2.5 GB).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Utu Pi OS Mee 2020 Mmelite biara na nkwado nnwale maka RPI 4 8GB na ndị ọzọ
Monado 0.2 biara na otutu nkwado, Vive Wand na Valve Index na ndi ozo
Mee 2020: Ihe oma, ihe ojoo na ihe na-adighi nma nke Software efu